ဤအပိုင်းကိုအထီးလိင်စိတ်နဲ့စိုက်ထူနှင့်အတူပါဝင်ဦးနှောက်ဒေသများ, neurotransmitters နှင့်ဟော်မုန်းအပေါ်သုတေသနနှင့်ဆောင်းပါးများပါဝင်သည်။ အများစုမှာအတော်လေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အကျွံ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သွေးဆောင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြီးထွားလာသောပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုပါ:
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ (အမျှဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ )
ဤစာမျက်နှာကို 120 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကားရပ် (2016) ၏ထိန်းချုပ် GABAergic transmission အတွက်အသစ်အခန်းကဏ္ဍ
penile စိုက်ထူဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: အ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍ (2005)
Erectile အလုပ်မဖြစ်ဗဟိုယန္တရားများ: တစ် Clinician သိ (2003) Want နိုင်ပါစေအဘယျသို့
penile စိုက်ထူ၏အရံထိန်းချုပ်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် dopaminergic ဂီယာအကြားအပြန်အလှန်။ (2011)
penile စိုက်ထူခြင်းနှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်၏ Pharmacological ကုသမှု (2011) အတွက်အခြေခံ၏ mechanisms
penile စိုက်ထူ (2001) ၏ဆေးဝါးဗေဒ
Testosterone နဲ့ Erectile အမည်: အခြေခံပညာသုတေသန မှစ. အန်ဒရိုဂျင်မလုံလောက်ခြင်းနှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2007) နဲ့ယောက်ျားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တစ်ဦးက New လက်တွေ့ Paradigm မှ
အထီးလိင်အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်အက်ရှင်၏သဘောသဘာဝ: hypogonadal ယောက်ျား (1983) အပေါ်တစ်ဦးစုစုပေါင်းဓာတ်ခွဲခန်း-Self-အစီရင်ခံစာလေ့လာမှု
(L) အသီးတိရိစ္ဆာန်များအပြုအမူတွေ (2016) ရှေးခယျြဘယ်လောက်မှာလိင် drive ကိုအရိပ်အမြွက်ပျံသန်း